Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny tena izy no himasoana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny tena izy no himasoana
Matahotahotra be ihany ny rehetra noho ity aretina mifindra ateraky ny coronavirus ity. Rariny raha mitandrina. Zava-dehibe ny efa nanakatonan’ny fitondrana ny sisin-tany fidirana sy fivoahana amin’ny fandraisana sy fifezivezena, ny famerana ny fivezivezena anatiny sy ivelany. Na eo aza anefa ny ahiahy, tsy mety raha toa samy anao izay hany fantany ny isan’olona tsirairay monina eto amin’ny nosy.
Maro ny feo mandeha fa ny tokony harahina dia ny fepetra apetraky ny fitondrana. Eo ny mpampita vaovao (gazety an-tsoratra sy ny haino amanjery) izay manana adidy amin’ny fampitana ny vaovao sy ny didy ary ny torohevitra ho an’ny mpamaky gazety, mpihaino radio sy mpanaraka vaovao amin’ny tele. Noho izany, ohatra iray: tsy ilaina mifendro raha tsy mahita fehivava. Araky ny fanambarana avy amin’ny mpikaroka momba ity Covid-19 ity, tsy manana elatra ary tsy manidina ilay virus ka ny antony ilana maska dia fitandremana ny tsy hipitihan’ny rora avy amin’ny tena raha ny tena no mitondra an’ilay otrikaretina. Hafa ny adidy atrehan’ny mpitsabo izay miondrikondrika manatona fofon’aina sy mitsapatsapa marary tsy misy fitsaharana, ny marary no tsaboiny. Ny tànana no mora mandray sy haingana mampiampita ilay virus.
Raha mamoha varavarana fiara izay avy nokasihan’olona mitondra ilay covid-19 ny tena dia efa niampitany izay ny tànana. Eo ilay anentanana matetika ny famerimberenana ny fanasana tànana. Mialoha ny hisafoan’ny tena maso, vava na volo na toerana hafa amin’ny vatana dia ny fanasana tànana ihany no fiarovana. Toy izany koa, mialoha ny fikasihana zavatra hafa mba tsy hampihanaka an’ilay virus. Takatra mazava an-tsaina avy amin’izany fa ny fitokatokanan’ny tsirairay no fiarovan-tena ary ny tsy fivezivezen’ny maro no antoky ny tsy fiparitahana haingana sy ny tsy fiitatry ny sehatra itombony an’isa. Izay fahaizan’ny rehetra manaja ny fepetra toy ny fanasan-tànana matetika andaniny ary ankilany ny fifehezan-tenan’ny rehetra amin’ny fijanonana an-trano sy ny fitandremana mba tsy ifampikasokasoka amin’olon-kafa arak’izay azo atao.
Na ho an’ny mponina any Amerika na ho an’ny mponina eoropeana, mila ezaka sy fanetren-tena izany mihidy aman-trano maharitra izany,. Mainka moa fa ho antsika izay tsy lafatra toy ny any amin’izy ireo ny trano fonenana. Efa tafiditra eto amin’ny nosy ilay virus, ka tsy maintsy ekena izany fepetra rehetra izany raha toa tsy te hiharan’ny fandripadripahana olona aman’alina noho ny tsy fanajan’ny sasany ny fitandremana voalaza.